भर्खरै रामेछापबाट अायो यस्तो दुःखकाे खबर, दुर्घटना एसर्इर्इ दिएर गएका विद्यार्थी परे – PathivaraOnline
Home > समाचार > भर्खरै रामेछापबाट अायो यस्तो दुःखकाे खबर, दुर्घटना एसर्इर्इ दिएर गएका विद्यार्थी परे
भर्खरै रामेछापबाट अायो यस्तो दुःखकाे खबर, दुर्घटना एसर्इर्इ दिएर गएका विद्यार्थी परे
admin April 1, 2018 समाचार 0
रामेछाप । रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिका २ ठोसेमा अरनिको सुपर एक्सप्रेस बस आइतबार अपरान्ह दुर्घटना हुँदा एक यात्रुको मृत्यु भएको छ भने ११ जना घाइते भएका छन् । दुर्घटनामा घाइते भएका उमाकुण्ड गाउँपालिका ३ बाम्तीका १८ वर्षीय सुवास गजमेरको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । गजमेर एसइई परीक्षा दिएर घर फर्केका थिए । घाइते मध्ये ३ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जिल्ला
प्रहरी कार्यालय रामेछापले जानकारी दिएको छ । काठमाडौंबाट रामेछाको बाम्ती जाँदै गरेको बा.३ ख २६९५ नम्बर बस ठोसेस्थित दोर्जेको उकालोमा दुर्घटनामा परेको हो । गाडी उकालो चढ्दै गर्दा टायर पञ्चर भएर सडकमा पल्टिदा दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रहरी निरीक्षक राजकुमार थापाले जानकारी दिनुभयो ।
घाइतेहरुलाई उपचारको लागि दोलखाको जिरी अस्तलात पठाइएको प्रहरी टोली जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले जानकरी दिएको छ । दुर्घटना भएका गाडीमा अधिकांश एसइई परीक्षा दिएर घर फर्केका विद्यार्थी रहेको बताइएको छ ।
उपमेयर तामाङलार्इ किस गर्न लगाउने यी कहाँका बहादुर हाकिमसाप हुन?
आफ्नै मृ त्युकाे सर्जिमन कागज बोकेर हिड्दै ६४ बर्षिया लक्ष्मी!
टाइगरको काखमा बसेकी श्रद्धाको छोटो ड्रेस झन माथी सरेपछि हातले पनि बचाउन सकेन लाज ! भिडियोसहित